SKYPE ကိုအတွက်ကိုယ်ပွားဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - SKYPE ကို - 2019
Skype ကိုပေါ်နဲ့အရင်းအမြစ်အမြင်အာရုံကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာသူစကားပြောခဲ့ပါသည်လူတစ်ဦး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုအတူကိုယ်စားပြုကြောင်းသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ avatar အသုံးပြုသူတစ်ဦးကသူတို့တစ်ဦးချင်းစီဖော်ပြရာမှတဆင့်ဓါတ်ပုံများ၏ပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ပုံအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် privacy ကိုအများဆုံးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, နောက်ဆုံးမှာဓာတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်။ ရဲ့ Skype ကိုအစီအစဉ်ကိုအတွက်ကိုယ်ပွားဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံကြည့်ရှုကြပါစို့။
ငါကိုယ်ပွား delete နိုင်သလား?
ကံမကောင်းစွာပဲ, Skype ကိုသစ်ဗားရှင်း, ယခင်မတူဘဲထဲမှာ, ကိုယ်ပွားဖျက်ပစ်လို့မရပါ။ သင်သာအခြားကိုယ်ပွားတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အသုံးပြုသူကိုယ်စားပြုစံ Skype ကိုအိုင်ကွန်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများအစားထိုးလျက်, ကိုယ်ပွားများဖယ်ရှားရေးဟုခေါ်တွင်စေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်မူရင်းတခြား image ကို download လုပ်မရကြသူအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သော icon တစ်ခုရှိပါတယ်။
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သရုံ algorithm ကိုအကြောင်းပြောဆိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Skype ကိုအိုင်ကွန်၏စံအသုံးပြုသူမှဓာတ်ပုံများကို (ကိုယ်ပွား) အစားထိုးလိုက်ပါ။
တစ်ဦးကိုယ်ပွားစံ display ကိုဖြင့်အစားထိုးသောအခါထကြွလာသောအလွန်ပထမဆုံးမေးခွန်း: ပုံရဖို့ဘယ်မှာ?
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း: င့်ဆိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပေါ် image ကိုရှာဖွေရေးအတွက်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "Skype ကို၏စံကိုယ်ပွား" မောင်းထုတ်ရန်နှင့်, SERPs ကနေသင့်ကွန်ပျူတာသို့ Download ပြုလုပ်ရန်။
ဒါ့အပြင်သင်အဆက်အသွယ်၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုပုံခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အသုံးပြုသူများ၏အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုဖွင့်လှစ်လျက်, menu ကနေ select လုပ်ပါ "View ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကို" နိုငျသညျ။
ထိုအခါကီးဘုတ် shortcut ကို Alt + PrScr အပေါ်စာရိုက်, သူ့ကိုယ်စားပြုပုံတစ်ပုံယူ။
နှင့်သင့် hard drive ကိုကသိမ်းဆည်းပါ။
သငျသညျအခြေခံကျကျစံပုံရိပ်ကြောင့်မသုံးကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, သငျသညျအစားတစ်ခုကိုယ်ပွား၏, ထိုအနက်ရောင်စတုရန်း, သို့မဟုတ်အခြားရုပ်ပုံများ၏ပုံရိပ်ကို paste နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ algorithm ကို remove အားကိုယ်ပွား
တစ်ဦးကိုယ်ပွားကိုဖျက်ပစ်ရန် "ဟု Skype ကို" ဟုခေါ်သောအပိုင်း menu က, ပယ်ခွာနှင့်တစ်သမတ်တည်း "ကိုယ်ရေးဒေတာကို" တွင်ဖွင့်နှင့် "ငါ့ကိုယ်ပွားကိုပြောင်း ... " မှဆက်လက်။
သုံးနညျးလမျးမြားကိုအစားထိုးကိုယ်ပွားပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။ တစ်ဦးကိုယ်ပွားကိုဖျက်ပစ်ရန်, ငါတို့ hard drive ထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပုံတစ်ပုံကို install တစ်နည်းလမ်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, " ... Browse" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
တစ်ဦး Explorer ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်ပါ, ငါတို့ Skype ကိုရဲ့ standard icon တွေကိုတစ်ပြင်ဆင်ထား image ကိုတွေ့ပါရန်ရှိသည်သော။ ပုံကိုရွေးချယ်ပါနှင့် "ပွင့်လင်း" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ဒီပုံ Skype ကို window ကိုသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကိုယ်ပွားပယ်ဖျက်ဖို့, "ဒီပုံကိုသုံးပါ" ဟုအဆိုပါခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အခုတော့မယ့်အစားတစ်ဦးကိုယ်ပွား install လုပ်ဘယ်တော့မှအသုံးပြုသူများတွင်ပြသသော Skype ကို၏ကိုယ်ပွား set စံပုံရိပ်၏။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, Skype ကိုအစီအစဉ်ကိုယ်ပွားများဖယ်ရှားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, ကိုယ်ပွားထား, အခြို့လှည့်ကွက်များ၏အကူအညီဖြင့်, သင်ဆဲပေးထားသောလျှောက်လွှာအတွက်အသုံးပြုသူများအကိုကိုယ်စားပြုသောစံပုံရိပ်ဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: LUKA x ESSEX - Skype Mash-up (အောက်တိုဘာလ 2019).